Xulashada ugu fiican ee sheekooyinka dhalinyarada
Faallooyinka sheekooyinka dhallinta
Jay Asher's 3-da Buug ee ugu sarreeya
Waxaa laga yaabaa in sumadda "qaangaarka qaangaarka ah" ay tahay marmarsiiyo si looga baxsado wax ka qabasho kasta oo ku saabsan suugaanta oo xoogga saarta dadka waaweyn marka loo eego dadka dhallinyarada ah. Runtu waxay tahay in qorayaasha noocani ay sannadihii ugu dambeeyay ku soo bateen guulo waaweyn, iyagoo isku daraya sheekooyinka jacaylka iyo barta dhexe ee u dhaxaysa ...
3-da Buugaagta ee James Dashner ee ugu sarreeya
Suugaanta dhallinyaradu waxay leedahay jacayl ku dhowaad kala qaybsanaan u dhexeeya noocyada jacaylka (nooca dhallinta) iyo khiyaaliga ama sheekooyinka sayniska. Waad ogtahay, warshadaha daabacaaddu inay waajib ku tahay inay u malaynayso inay taqaanno meesha laga garaaco hubaal akhristayaasha hore. In kasta oo sidoo kale, si caddaalad loo helo, waxaan heli karnaa nooc kale oo ...
3 buugaagta ugu fiican ee Blue Jeans
Haddii uu jiro qoraa suugaanta dhallinyarada oo si xoog leh uga soo ifbaxay sannadihii la soo dhaafay Spain, waa Jeans -ka Buluuga ah. Francisco de Paula Fernández wuxuu si guul leh uga faa'iideystay magac -xumo cusub oo soo jeedin u leh dhagaystayaashiisa qaangaarka ah. U -dhawaanshaha akhristayaasha da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 17 ayaa la samayn karaa ...
Habeenkii Habeenkii Qoraaga Stephenie Meyer
Oo markay u muuqatay in Stephenie Meyer loo weeciyay halganka suugaaneed ee kale, furaha riwaayadda dembiga, iyo xoreyntii ay u malaysay marka loo eego sheekada fiidnimada, vampires -ka qaangaarka ah iyo qaniinyadooda dareenka leh udgoonka toonta iyo daa'in, aakhirkii may ahayn waxay noqon kartaa. Sababtoo ah Meyer ...
Knife in Hand, oo uu qoray Patrick Ness
Sheekada Todd Hewitt, oo lagu sheegay sheekadan, waa tusaalaha aadamiga ee la xiriira deegaankiisa. Kaliya jawiga bulshadeena ee hadda jira ayaa sheekadan loola dhaqmaa sida maahmaahda mustaqbalka. Qaadashada aragtida ay sheekooyinka sayniska ina siinayaan marmarsiiyo u ah ...
Riquete mid ka mid ah pompadour ah, ee Amélie Nothomb
Mid ka mid ah baalasha hadda ugu yaabka badan waa Amélie Nothomb. Buuggiisii ​​hore ee lagu daabacay Spain, The Count Neville Crime, wuxuu nagu qaatay sheeko-baaritaan gaar ah oo leh nashqad go'an, kaas oo, markii uu daahfuray Tim Burton, uu ku dambayn doono inuu isu beddelo filim, iyo wax badan oo ka mid ah wax soo saarkiisii ​​hore. Laakiin gudaha…
Ma tihid noocayga, Chloe Santana
Waxaa jira waqti uu jaceylku noqon karo madadaalo yar. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa rumaysato inaad gacanta ku hayso, laakiin daqiiqada jacaylka aan soo noqoshada lahayn had iyo jeer way dhammaataa. Marka laga reebo… marka arrimuhu u dhammaadaan si aan sax ahayn, waxaad la yaabi doontaa niyad -jabka. Kaftan ku qaado. Ma leedahay ...
Waxaa bilaash ah Patrick Ness
Ka hor -tagga arrimaha bulshada qaarkood oo ka imanaya sheeko dhallinyaradu waa lama huraan marka la eego wacyi -gelintaas iyo dhalashada kala duwan ee ku saabsan dhexdhexaadnimada dadka. Aniguna waxaan dhahaa "lama huraan" maxaa yeelay waxay ku jirtaa da 'yarta halkaas oo la dejiyo qaababka waxa aan noqon doonno qaangaarnimada. Dhalinyarada ayaa kashifay ...
Sideed, waxaa qoray Rebeca Stones
Si loo qoro sheekada ugu fiican, waa inaan helnaa dheelitirka sixirka ee shaqada wareegtu abuuri karto. Markaa waxay ku habboonaan lahayd in la magdhabo aflagaadada, bahdilka iyo caadifadda dhallinyarada qoraa ama qoraa, iyada oo loo cuskanayo, xirfadda iyo caqliga qoraaga qaangaarka ah. IYO…
Kun jeer weligeedba, waxaa qoray John Green
Buugga dhallinyarada ee hadda jira wuxuu bixiyaa akhris badan oo ku wajahan noocyada kala duwan. Waxaa jira nolol dhaafsiisan sheekooyinka jacaylka (oo aan ahayn inay khaldan yihiin, wax walba waa la sheegaa), laakiin qoraayaasha ka dhex raadiya dhagaystayaasha dhallinta yar had iyo jeer waxay wadaagaan hal fikrad: xoojin. Xiisado daran, jacayl jaceyl ...
Walaalo. Xiriirrada aan dhammaadka lahayn, ee Anna Todd
Dabeecadaha kala duwan ee walaalaha waa wax aan marnaba ka joogsan layaabka kuwa waalidka ah. Laakiin marka laga soo tago falanqaynta nafsaaniga ah ee dibedda, buuggan Walaalaha Lazos Infinitos wuxuu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeeya walaalaha, kiiskan u dhexeeya afarta qof ee sheekada: ...